ပါဝင်ပစ္စည်းများ ။ ( Ingredients )
၁ ။ ငါးနှင်းဖြူ ( Snow Cod Fish Steak ) = ( 180 g ) ၁၂ ကျပ်သားခန့် 
၂ ။ သံပုရာရည် ( Lime Juice ) = ( 1 tsp ) ၁ လ္ဘက်စွန်း
၃ ။ ဆား ( Salt ) = ( ½ tsp ) ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
၄ ။ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်( Crushed Pepper ) = (apinch ) အနည်းငယ်
၅ ။ ခရမ်းချဉ်သီး ( Tomato ) = (3numbers ) ၃ လုံး
၆ ။ အော်ရီဂါနိုရွက် ( Fresh Oregano Leaves ) = ( 25 g ) ၂၅ ဂရမ်
၇ ။ ကြက်သွန်နီ ( Onion ) = ( 1 number ) ၁ လုံး
၈ ။ ကြက်သွန်ဖြူ ( Garlic ) = (3cloves ) ၃ တတ်
၉ ။ သံလွင်ဆီ ( Olive Oil ) = ( 1 tbsp ) ၁ စွန်း
၁၀ ။ ထောပတ် ( Unsalted Butter ) = ( 1 tbsp ) ၁ စွန်း
၁၁ ။ သကြား ( Sugar ) = ( ½ tsp ) ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်း။ ( Cooking Direction )
၁ ။ ငါးနှင်းဖြူ ကို သံပုရာရည် ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ် တို့ ဖြင့် အရသာသွင်းထားပါ ။
( Marinating Snow Cod Fish Steak with Lime Juice, Salt , Crushed Pepper and putaside . )
၂ ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အခွံနွှာရျွ် ကြိတ်ထားပြီး ကြက်သွန်နီ ၊့ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် အော်ရီဂါနိုရွက် တို့ ကို နုတ်နုတ်စဉ်းထားပါ ။
( Peel the Tomato and Blend well , then chopped some Onion, Garlic and Fresh Oregano Leaves separately . )
၃ ။ သံလွင်ဆီ နှင့် ထောပတ် ကို ဒယ်အိုးတွင် အပူပေးပြီး အသင့်နုတ်နုတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှုင့် အော်ရီဂါနိုရွက် တို့ ကို ဆီသတ်ရျွ် အသင့်ကြိတ်ထားသော ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်ကိုချက်ထားပါ ၊ အရသာကို ဆား ၊ သကြား နှုင့် ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ ဖြင့် ထိမ်းညှိပေးပါ.။
( Sauté Onion, Garlic and Fresh Oregano Leaves with Olive Oil and Unsalted Butter to get flavor ,then add blended Tomato Puree and adjust the taste with Salt, Sugar and Crushed Pepper until get texture . )
၄ ။ အကင်ဒယ်အိုး တွင် သံလွင်ဆီကို အပူပေးပြီး အရသာသွင်းထားသော ငါးနှင်းဖြူ ကို အိုးကပ်ကင်ရျွ် အသင့် ချက်ထားသော ခရမ်းချဉ်သီးအော်ရီဂါနို အနှစ် နှင့် တွဲဖက်တည်ခင်းပါ။
( Heat up the Grill Pan with Olive Oil and Grill the marinated Snow Cod Fish Steak until get tender and serve with Fresh Tomato Oregano Sauce. )